Soosaarka iyo Warshad Soosaarka Cawska Shaley ee Shiinaha. | Ruisheng
100% Dabiiciga AD Fuuq Baxsan / Qalalan Cawska Casiirka Casiirka
Cawska shaciirku waa mid ka mid ah cowska cagaaran - dhirta keliya ee dhulka ku taal ee bixin karta gargaar nafaqo oo keliya laga bilaabo dhalashada illaa gabowga. Shaciirku wuxuu cunno ahaan ugu adeegi jiray dhaqamada badankood. Isticmaalka shaciir ee cuntada iyo ujeeddooyinka daawada waxay soo jirtay taariikh hore.
Xaddiga yaabka leh ee fiitamiinnada iyo macdanta waxaa laga helaa caleemaha shaciirka cagaaran. Caleemaha waxay awood u leeyihiin inay nafaqada ka qaataan ciidda. Markay caleemaha shaciir yihiin 12-14 inji dherer, waxay ka kooban yihiin fiitamiino badan, macdanno, iyo borotiinno lagama maarmaan u ah cuntada aadanaha, oo lagu daray chlorophyll.
1. Budada cawska shaciirka ah ee loo isticmaalo in lagu xoojiyo difaaca jirka aadanaha;
2. Budada caws ee shaciirku waa antioxidant awood badan;
3. Budada caws ee shaciir leh hawsha slimming;
4. Budada cawska shaciirta ah ee lagu daaweeyo calool istaagga;
5. Budada caws ee shaciirku waxay caawisaa socodka dhiigga, iyo sunta guud ee jirka.
1. Lagu dabaqay aagga wax soo saarka caafimaadka, budada laga soosaaray cawska shaciirka ayaa loo isticmaali karaa alaab ceeriin ah;
2. Lagu dabaqay aagga daawada, budada cawska shaciir ayaa loo isticmaali karaa alaab ceeriin ah;
3. Lagu dabaqay warshadaha cuntada, budada cawska ka baxda ayaa loo isticmaali karaa in lagu daro.
Muuqaal / Midab Cagaar
Udgoon / Dhadhan Dhadhanka astaamaha ee Cawska Shaciirka ah, ma laha ur shisheeye ama dhadhan
Wadarta Khamiirka & Caaryada <100cfu / g
DRUM, Faakiyuum la buuxiyay, Bacda Aluminium Aluminium
1. 1-5kg / bac aluminium aluminium ah, laba bac oo gudaha ah iyo hal bac aluminium bannaanka ah.
2. 25kg / fiber drum, Miisaanka Gross 28kgs.
Kartoon: 25KG Miisaanka Net; 28 KG Miisaanka Guud. Bacaha PE ee fasalka cuntada & kartoonka ka baxsan.
24 Bilood laga bilaabo taariikhda wax soo saarka iyada oo lagu talinayo xaaladaha kaydinta lagu taliyay.
Hore: 100% Rooti dabiici ah / qalalan AD Lotus Root
Xiga: 100% Dabiiciga AD Fuuq Baxsan / Qallalan Qaraha Qaraha Mashiinka / Jeex
Budada Basasha oo Fuuq baxday
100% Kaabashka Dabiiciga ah ee Qallalan / Qallalan AD Purple ...
Garlic Granule oo fuuq baxay
Baradho la jarjaray, Budada Karootada qalalan, Karootada qalalan Jumlada, L - Phenylalanine (PHE), Taurine, Vermicelli,